Ny fanambin'ny Andro Tany dia efa azon'ny rehetra | Avy amin'ny mac aho
Androany maraina iny niseho ny fanamby tamin'ny Andro Tany ho an'ireo mpampiasa manana Apple Watch. Ora vitsy taorian'ny nanombohany ny tatitra momba ny tontolo iainana sy ireo mpiasan'ny magazay Apple rehetra eran'izao tontolo izao manao T-shirt maitso ho fanomezam-boninahitra ny planeta, dia efa manana ny fanamby isika amin'ny Alahady.
Ny zava-dehibe amin'ity fanamby ity dia ny fampihetseham-batana ary noho izany amin'ity tranga ity dia tsy ilaina ny ezaka be loatra, ampy fotsiny ny fanazaran-tena mandritra ny 30 minitra na mihoatra. haka antsika ity zava-bita vaovao ity, ireo sticker hafa ho an'ny fampiharana Messages ary ho somary mety kokoa.
Fantatsika fa ny vidin'ny alahady, Mandehana haingana tokoa ny 30 minitra ary afaka miditra sy mahazo an'io fanamby io daholo ny olona. Tsy misy karazana hetsika manokana angatahina, amin'izay afaka mandeha mitsangatsangana isika, mandray bisikileta na izay tiana fa mifindra.
Manampy antsika ireo fanamby ireo
Tsy isalasalana fa, ho an'ireo izay zatra fampihetseham-batana, fantatr'izy ireo tsara fa manomboka ny vidiny, raha vao manao hetsika ara-batana voalohany isika dia mety ho tiantsika izany ary tohizantsika izany. Etsy ankilany, amin'ny habetsaky ny hetsika ara-panatanjahan-tena ananantsika ankehitriny, sarotra ho antsika ny tsy mitia zavatra ary raha tsy izany dia afaka mandeha an-tongotra foana isika. Ny Apple Watch dia nahavita nampandeha tamin'ny mpampiasa maro ny faniriana hanao fanatanjahan-tena ary amin'ity alahady ity dia azontsika antoka fa mihoatra ny iray no handeha handray ny fanamby ary aorian'izany dia ho avy ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fanambin'ny Andro Tany dia efa azon'ny rehetra
Tantano ny fifandraisanao amin'ny matihanina miaraka amin'ny Book of Business Contact